Hlola i-Australia - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze e-Australia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yase-Australia
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Australia
Hlola i-Australia, umhlaba udume ngezimanga zayo zemvelo nezikhala ezivulekile, amabhishi awo, ugwadule, "isihlahla", "ne-Outback" kanye ne-kangaroo.
I-Australia ihlala emadolobheni iningi labantu ligxile kakhulu ogwini olusempumalanga naseningizimu-mpumalanga. Tindzawo letingetulu kwelive letinelive tiyindzi. Izifundazwe ezinabantu abaningi kakhulu iVictoria neNew South Wales, kepha indawo enkulu kunazo zonke emhlabeni yiNtshonalanga Australia.
I-Australia inezindawo ezinkulu ezakhiwe ngamahlathi ngenxa yezolimo, kepha iningi lamahlathi endabuko ahlala emapaki ezwe lonke nakwezinye izindawo ezingakakhiwa.
Yisiqhingi esikhulu esinokuhlukahluka okubanzi kwesimo sezulu. Akushisi ngokuphelele futhi kunqabelwe yilanga, njengoba bekusikisela ama-stereotypes. Kunezifunda ezingaba ezipholile futhi ezimanzi impela.
Ngokusekelwe ebufakazini besayensi nakwithiyori, isiqhingi sase-Australia kungenzeka ukuthi sahlaliswa okokuqala ukwedlula iminyaka ye-50,000 eyedlule ngamaza alandelanayo okufika kwabantu abavela eningizimu naseningizimu-mpumalanga Melika.
I-Australia inabantu abanamasiko ahlukahlukene cishe kuyo yonke inkolo nendlela yokuphila. Abangaphezu kwengxenye eyodwa kwezine base-Australia bazalwa ngaphandle kwe-Australia, kanti enye ikota inomzali oyedwa ozelwe kwelinye izwe. Melbourne, Brisbane kanye Sydney izikhungo zamasiko ahlukahlukene. Onke la madolobha amathathu adume ngokuhlukahluka nekhwalithi yezobuciko bomhlaba wonke, imizamo yokuqonda, ne-cuisine etholakala ezindaweni zokudlela zawo eziningi. ISydney iyisizinda sobuciko, isiko, nomlando equkethe ubuciko bokwakha obusezingeni lomhlaba, iSydney Harbour Bridge. IMelbourne ikhuthaza ngokwayo njengesizinda sezobuciko, kanti iBrisbane izithuthukisa ngemizana ehlukahlukene yasemadolobheni. I-Adelaide kumele ikhulunywe ngokungeziwe, njengoba yaziwa ngokuba yisikhungo semikhosi kanye namathonya amasiko amaJalimane. Perth, futhi, yaziwa ngesiko layo lokudla newayini, amaparele, amagugu nezinsimbi eziyigugu kanye nomkhosi wezobuciko waphesheya kwezilwandle. Kunokuningi okuningana okufanele kudalulwe, kepha lokhu kunikeza umbono ngesingeniso. Izindawo ezincane zasemakhaya ngokuvamile zibonisa iningi lesiko lama-Anglo-Celtic ngokuvamile elinenani elincane lama-Aborigine. Cishe yonke imizi nemizi emikhulu yase-Australia ikhombisa umphumela wokufika kwabantu abavela eYurophu, e-Asia, eMiddle East nasePacific okwenzeka ngemuva kweMpi Yezwe II futhi kwaqhubeka kwaba ama-1970s, eminyakeni eyikhulu emuva kwempi lapho abantu base-Australia beqhamuka cishe kwizigidi ezingama-7 kubantu abangaphezu kwezigidi ezingama-20.
Canberra yinhlokodolobha yezwe lonke eyakhelwe inhloso e-Australia
Izinto eziningi ezikhangayo e-Australia zihlala zivulekile unyaka wonke, ezinye zisebenza ngokunciphisa imvamisa noma ngamahora amafushane ngenkathi yesikhathi esiphakeme.
Lord Howe Island - Isikhathi samahora amabili ukundiza usuka eSydney, unesibalo esingapheli sabantu, kanye nezakhiwo ezithuthukisiwe. (Ingxenye yeNew South Wales)
I-Norfolk Island - Izindiza eziqondile ezivela e-East Coast, futhi zisuka Auckland. Inani labantu abahlala njalo, kanye nezikhungo ezithuthukisiwe.
IChristmas Island - Idumile ngokufuduka kwayo kokubomvu. Izindiza ezivela Perth futhi Kuala Lumpur, izindawo zokuthuthukisa.
Cocos Islands - Iziqhingi zaseCoros, ezinabantu abaningi, ezitholakala ngezindiza ezivela ePerth, ezinendawo ethile yokuhamba.
Iziqhingi zaseTorres Strait - phakathi kweCape York ne Papua New Guinea, iziqhingi eziningi zinezindawo zokuhambela kodwa zidinga imvume kubanikazi bendabuko abazovakashela. Izindiza ezivela eCairns.
I-Ashmore kanye neCartier Islands - akuhlalwa muntu ngaphandle kwezindawo zabahambi ezithuthukile.
I-Kangaroo Island - Isiqhingi sesithathu ngobukhulu e-Australia kanye neparadesi labathandi bemvelo nezilwane zasendle.
I-Great Barrier Reef - ngasogwini lwaseQueensland, kutholakala kalula kusuka eCairns, futhi kufinyelela kude naseningizimu yeDolobha lase1770
Amadolobha nezindawo ukuvakasha
Ngenkathi kungekho mkhawulo enanini lemali elingangeniswa noma ngaphandle, amasiko ase-Australia futhi adinga ukuthi umemezele uma uletha i-AUD 10,000 (noma ilingana nemali yangaphandle) noma ngaphezulu ngaphakathi noma ngaphandle kwezwe futhi uzoba icele ukugcwalisa amaphepha athile.
I-Australia yindawo ekude ukusuka kwenye indawo emhlabeni, ngakho kubavakashi abaningi, ukuphela kwendlela yokungena e-Australia ngohamba ngendiza.
Cishe isigamu sabo bonke abahambi bamazwe aphesheya bafika kuqala e-Australia eSydney, idolobha elikhulu kunawo wonke. Ngemuva kweSydney, inani elikhulu labahambi libuye e-Australia Melbourne, Brisbane kanye Perth. Kukhona futhi nezinsizakalo eziqonde ngqo zamazwe omhlaba eziya e-Adelaide, eCairns, eDarwin, eGold Coast naseChristmas Island yize lezi zikhawulelwe ikakhulu izindiza ezivela E-New Zealand, Oceania, noma i-Southeast Asia.
I-Australia yinkulu kepha inabantu abaningi, futhi kwesinye isikhathi ungahamba amahora amaningi ngaphambi kokuthola impucuko elandelayo, ikakhulukazi lapho usuka empumalanga yaseningizimu nasempumalanga.
Amadolobha amakhulu azungeze i-Australia anezitolo eziningi ezihlinzeka ngezimoto eziningi eziqashisayo ezivela ezinkampanini ezinkulu eziqashisayo zomhlaba wonke. Emadolobheni amancane ukuqasha izimoto kungaba nzima ukuthola. Izindleko zendlela eyodwa zivame ukusebenza ezitolo ezincane zesifunda.
Kuningi ongakubona e-Australia ongakuboni kalula kukho ukuhlelwa kwemvelo kwenye indawo
I-Australia inezimpawu eziningi, ezidume umhlaba wonke. Ukusuka e-Uluru enkabeni ebomvu, kuya eSydney Harbour Bridge nase-Opera House eSydney.
Ogwini lweLanga laseQueensland idrayivu emfushane eya ezinkanjini zikamoba ezingaphezulu kwe-Rosemount ongathola ukubuka okuhle kwe-Mt Coolum ehlala amamitha angu-208 ngaphezu kogu lolwandle, ukuthandwa okuthandwa kakhulu kwabahamba ngezinyawo.
Ehlobo, ikhilikithi laphesheya lidlalwa phakathi kwe-Australia okungenani nezinhlangothi ezimbili zokuvakasha. Imidlalo ijikeleza kuwo wonke amadolobha amakhulu. Ukuzwa umdlalo wesintu ubambe usuku lomdlalo wokuhlola woNyaka omutsha eSydney Cricket Ground, uvame ukuqala ngoJanuwari 2nd, noma umdlalo we-Boxing Day Test Melbourne Ikhilikithi Ground.
I-Australia Open, enye yethenisi Grand Slams, idlalwa minyaka yonke eMelbourne.I-Medibank International idlalwa eSydney Olimpiki ngoJanuwari.
Melbourne futhi isingatha iFomula One yase-Australia Grand Prix, eqhutshwa kanye ngonyaka.
Umjaho wamahhashi - Onke amadolobha amakhulu namadolobhana amaningi ezifunda anezifundo zawo futhi ukubheja ngobuhlanga kuyathandwa ezweni lonke. INdebe yonyaka yeMelbourne kungenzeka ukuthi ibe ngumhlangano owaziwa kakhulu lapho amaVictoria amaningi ethatha usuku emsebenzini ukuyogubha noma ukuya kuwo. Kujwayelekile ukubona abanye osaziwayo abaphezulu bezwe begqoke izingubo zabo ezinhle kakhulu ezitebhisini.
Lindela wonke umuntu oxhumana naye e-Australia ukuba akwazi ukukhuluma isiNgisi, noma ngabe kungolimi lwabo lokuqala noma cha. Abasendaweni kanye nokufika kwakamuva kwayo yonke iminyaka nezizinda kulindeleke futhi bavame ukukhuluma okungenani isiNgisi okungenani, kanye neningi lezivakashi.
Abashintshi bemali e-Australia basebenza emakethe yamahhala, futhi bakhokhisa uhla lwamakhomishini aphansi, imali yamaphesenti, nezimali ezingakhiswanga ezakhelwe ngenani lokushintshana, kanye nenhlanganisela yazo zontathu. Ngokujwayelekile ukubheja okuhle kakhulu ukugwema izikhungo zezindiza nezikhungo zezivakashi lapho ushintsha imali, futhi usebenzise amabhange ezikhungweni ezinkulu. Lindela ukuthi imali ihluke kakhulu phakathi kwezikhungo. Njalo uthole isilinganiso ngaphambi kokushintsha imali.
Ama-Cash dispensing Automatic Teller Machines (ATM) atholakala cishe kuwo wonke amadolobha ase-Australia.
Asikho isidingo sokufika e-Australia ngemali uma une-Cirrus, Maestro, MasterCard noma ikhadi le-Visa: izikhungo zezindiza zamazwe aphesheya zizoba nemishini eminingi yokuthengisa engakhipha imali yase-Australia ngezindleko ezibekwe yibhange lakho kanye nemali ye-ATM.
Amakhadi wesikweletu amukelwa kabanzi e-Australia. Cishe bonke abathengisi abakhulu njengezitolo ezinkulu bamukela amakhadi, njengoba kwenza abaningi, kodwa hhayi bonke, izitolo ezincane. Amakhadi okudonswa kwemali e-Australia nawo angasetshenziswa ngohlelo olwaziwa ngokuthi i-EFTPOS. Noma iliphi ikhadi elibonisa ama-logo we-Cirrus noma we-Maestro lingasetshenziswa kunoma yiliphi i-terminal elibonisa lawo malogo.
Izindawo zokudlela, abantu base-Australia badla njalo, futhi imvamisa uzothola okukodwa noma okubili ongakukhetha ukukudla ngisho nasemadolobheni amancane, ebanzi emadolobheni amakhulu nasemadolobheni amakhulu.
Abahamba ngebhishi kufanele babhukuda phakathi kwamfulegi abomvu naphuzi aqoka izindawo ezihanjisiwe. Amabhishi awahanjiswa nge-24-amahora ngosuku noma ngisho nangawo wonke amahora asemini. Esikhathini esiningi izisebenzi zokuzisiza ezisindisa abagibeli bendawo noma abagada impilo zitholakala ngezikhathi ezithile kuphela, futhi kwamanye amabhishi ngezimpelasonto, futhi kuvame kuphela phakathi nehlobo. Izikhathi eziqondile ngokuvamile ziboniswa ekungeneni kumabhishi amaningi. Uma amafulegi engakhuphukile, khona-ke akekho umuntu ojikelezayo - futhi akufanele ubhukule. Uma ukhetha ukubhukuda, qaphela ubungozi, izimo zokuhlola, hlala ekujuleni kwakho, futhi ungabhukudi wedwa.
Ama-hard surfboards nobunye ubuciko bamanzi obufana nama-surf skis, ama-kayaks njll, azivunyelwe phakathi kwamafulegi abomvu naphuzi. Lobu buciko kumele busetshenziswe kuphela ngaphandle kwamafulegi aluhlaza okwesibhakabhaka 'we-surf abavunyelwe'.
Iziphepho ezishisayo (iziphepho) zenzeka ezindaweni ezishisayo phakathi nehlobo.
Ezindaweni ezishisayo ezisenyakatho neNkathi Yomvula kwenzeka ezinyangeni zasehlobo zikaDisemba, uJanuwari nangoFebhuwari, kuletha izimvula ezinamandla nezikhukhula ezivame ukufika kulezo zifunda.
Amapaki ezwe lonke kanye nezindawo ezinamahlathi eningizimu ye-Australia, kufaka phakathi izingxenye ezithile zamadolobha amakhulu eduze kwamapaki ezwe kanye namahlathi, kungasongelwa ngokuqubuka komlilo (i-bushfire) (imililo yasendle ehlobo)
I-Australia yizwe elomile kakhulu elinezindawo ezinkulu zogwadule. Kungashisa futhi. Ezinye izingxenye zezwe zihlala zisesomeni.
Lapho uhamba ezindaweni ezikude, kude nemigwaqo evaliwe, lapho amandla okushayelwa isikhathi esingangesonto engayiboni enye imoto kungokoqobo impela, kubalulekile ukuthi uphathe owakho amanzi (i-4 gal noma i-7 L ngomuntu ngamunye ngosuku ). Ungadukiswa okufakiwe kumamephu anjengokuthi 'kahle' noma 'intwasahlobo' noma 'ithangi' (noma yikuphi ukungena okubonisa ukuthi kukhona umzimba wamanzi). Cishe konke kumile, futhi amachibi amaningi asenkabeni yephayini owosawoti owomile.
Ukuchayeka elangeni ezindaweni ezise-Australia njalo kubangela ukushiswa yilanga. Ukuthola i-sunburnt kungakwenza uzizwe unemfiva futhi ungaphatheki kahle futhi kungathatha izinsuku ezimbalwa noma amasonto ukuphulukisa ngokuya ngobunzima.
Amanzi empompo e-Australia acishe aphephe ukuwaphuza, futhi ayomakwa empompini uma kungenjalo. Amanzi asemabhodleleni atholakala kabanzi. Ukuthela amanzi ngezinsuku ezishisayo kuwumqondo omuhle ezindaweni zasemadolobheni, futhi kuyisidingo uma uhamba ngezinyawo noma uhamba edolobheni. Ezindaweni lapho amanzi kampompi engalungiswa khona, amaphilisi okubulala inzalo angasetshenziswa njengenye indlela yokubilisa.
Hlola masisha i-Australia isonto lonke futhi kuzozwakala sengathi kusekhaya…
Isakhiwo seRoyal Exhibition kanye neCarlton Gardens
I-Sydney Opera House
Izindawo Zokuvunyelwa Kwase-Australia
I-Budj Bim Cultural Landscape